Dalkaan.com -Wararka Ugu Danbeeyey » Jubaland oo si kulul uga hadashay xariga Wasiir Janan
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo Sagaal maalmood ka hor lagu qabtay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa wali ku jira gacanta Ciidamada amaanka Soomaaliya, iyadoo aan wali la soo taagin Maxkamadd.
Janan oo ahaa wasiirka amniga Jubbaland ayaa la sheegay inuu ku xiranyahay xabsiga godka Jilacow oo ay gacanta ku hayso hey’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Wasiirka beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa Warbaahinta u sheegay in wasiirkoodii amniga markii ugu war dambeysay lagu hayey Godka Jilicow oo sida uu sheegay ay ku booqatay haweeney u dhaxda, isagoo eedeyn u jeediyay dowladda federaalka oo uu sheegay inay sharci darro ku xirtay masuul xasaanad leh, ayna aaminsan yihiin inaan loo heysan dambi ee uu u xiranyahay arimo siyaasadeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa 31-kii bishii hore ee Agosto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka xirtay Wasiirka amniga ee Maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana laga reebay diyaarad uu la socday oo kusii jeeday dalka Itoobiya, taas oo Transid ku eheed magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Previous articleDilal kala duwan oo Muqdisho ka dhacay (Faahfaahin)
Next articleTrump oo baabi’iyay heshiiskii nabadda ee dalkiisu lagalay Taalibaan.